Apple Maps dia mampiseho ireo toerana fanaovana vaksiny amerikana miady amin'ny COVID-19 | Vaovao IPhone
Apple Maps dia mampiseho ireo toerana fanaovana vaksiny amerikana miady amin'ny COVID-19
Ny fanaovana vaksiny manohitra ny COVID-19 dia iray amin'ireo fanamby ara-pitaovana sy teknolojia lehibe indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. ny areti-mifindra Nivoatra tao anaty onja telo izy io, namela maty an-tapitrisany ary teknolojia no nanakaiky kokoa ny marary, hampiala voly rehefa nijanona tao an-trano ny tsirairay na nampiroborobo ny fikarohana siantifika. Apple koa dia nitoby tamin'ny fampiasam-bola amin'ny famokarana fitaovana avo lenta na famolavolana ny API miaraka amin'i Google hanarahana ny fifandraisana. Raha ny marina dia mitranga ny vaovao ary ora vitsy lasa izay Apple Maps dia mampiseho toerana fanaovana vaksiny any Etazonia. Ity fampahalalana nangonina avy amin'ny VaccineFinder ity dia hahafahan'ny Amerikanina mitady toerana fanaovana vaksiny eo akaiky eo.
Ny toerana fanaovana vaksiny COVID-19 akaiky indrindra, ankehitriny ao amin'ny Apple Maps
VaccineFinder dia serivisy an-tserasera maimaim-poana ahafahan'ny mpampiasa mitady toerana manome vaksiny. Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka toa ny tobim-pahasalamana, fivarotam-panafody ary sampana ara-pahasalamana izahay mba hanomezana vaovao marina sy vaovao momba ny serivisy fanaovana vaksiny.
Ny serivisy VaccineFinder tantanan'ny Ankizy Hopitaly Boston ary tompon'andraikitra amin'ny fanangonana fampahalalana momba ny toerana ahafahan'ny olom-pirenena amerikana fanaovana vaksiny. Tany Etazonia izy ireo dia nanolotra soso-kevitra ny hanome vaksiny ireo mpiasan'ny laharana voalohany sy ireo izay hiditra am-ponenana aloha. Aorian'izay, ho an'ireo mihoatra ny 75 taona miaraka amin'ireo mpiasa tena ilaina. Ary farany, olona eo anelanelan'ny 65 sy 74 taona, olona eo anelanelan'ny 16 sy 64 taona ary mpiasa tena ilaina.
COVID-19, iPhone ary marketing… fangaro mampidi-doza
Misy izany fampahafantarana izany ao amin'ny VaccineFinder Nampidirina tao amin'ny Apple Maps izy io ahafahanao manatona ireo tranokala fanaovana vaksiny akaiky indrindra avy amin'ny fitaovana finday rehetra ao amin'ny paoma lehibe. Ho fanampin'izany, ny Amerikanina dia afaka manontany an'i Siri momba ireo toerana ireo ihany koa ary hahazo sari-tany misy toerana akaiky indrindra izy ireo. Ity dia fomba iray hafa hanandramana hanamorana ny vaksiny izay, noho ny toetra mampiavaka azy sy ny fitaoman'ny haino aman-jery, dia mety ho voaporofo fa sarotra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple Maps dia mampiseho ireo toerana fanaovana vaksiny amerikana miady amin'ny COVID-19
Prosser dia mety ho lany volomaso maminavina ny hetsika Apple amin'ny volana aprily